Dwelisa All By Model
Model wedi'i addasu
Peiriant Pecynnu Aml Lôn
Llinell Pecynnu Eilaidd
Case Ukupakisha Line
Dwelisa All By Application
Dwelisa All By Bag Ukuma
4 icala bag uphawu machine nokupaka
PE monofilm machine bag nokupaka
Bag selio cefn neu beiriant pacio bagiau gusset
Peiriant pacio bagiau doypack Premade Zipper
isixhobo sokubhola lokufaka
Piston lokufaka-Ulwelo Pump
Selio Ochr Awtomatig + Peiriant crebachu gwres
Machine ezweni ukuba
Womthamo Cup lokufaka
Zenzekelayo Flour, Iswekile kwangaphambili Iphepha Bag Packaging M ...
Ihowuliseyili bokushicilela kwibhokisi sopakisho iingxowa
Ngokupheleleyo Auto Sachets ezincinane Into Big Umlomo Open womluki S ...
Oluzenzekelayo nkqo Baling Machine, iingxowa ezincinane Into Bi ...
I-Rotary Chilli Powder eyenziwe ngaphambili yengxowa enikwe iPakethegi ...
Isiraphu yendlela emininzi, isosi emva kokutywina ibhegi yepakethi ...
Ngokupheleleyo Auto Sachets ezincinane Into Big Umlomo Open ephothiweyo iingxowa Sekondari Packaging Machine
Oluzenzekelayo Bag Ukondla Packaging Machine (Double Ingqwayi Uhlobo)
Inkqubo Imveliso: sackets → yokuthutha tyaba → kabini ithambeka yokuthutha → ngesantya esiphezulu yokuthutha → Umatshini wokubala ingxowa → oluzenzekelayo zokutyisa ibhegi umatshini → auto wokuthunga umatshini → ephothiweyo ibhegi output yokuthutha
Main technical iparameters:
1 Packaging uluhlu: 150g ~ 1000g sachet iimveliso
2. Iimathiriyeli Packaging: lephepha, ingxowa ephothiweyo (zazizaliswe PP / PE film)
3. ukupakisha zesantya: 4 ~ 14 iingxowa ephothiweyo / min, (40 ~ 180 pouches / min)
(speed kancinane zitshintshiwe ngokungqinelana iimveliso ezahlukeneyo)
4. uhlobo Simo: baiting wesisele olunye, umqolo single ngokubekwa
sackets → swa tyaba → kabini ithambeka yokuthutha → ngesantya esiphezulu yokuthutha → ibhegi ukubala kumatshini → oluzenzekelayo zokutyisa ibhegi machine umatshini → auto wokuthunga → ibhegi ephothiweyo output yokuthutha
Isantya 3. Ukupakisha: 4 ~ 14 iingxowa ephothiweyo / min, (40 ~ 180 pouches / min)
(isantya iguqulwe kancinane ngendlela iimveliso ezahlukeneyo)
1. I-Hefei IECO Izixhobo ezikrelekrele ze-CO., LTD (I-CHANTEC PACK) ikwisiXeko i-Hefei, kwiPhondo lase-Anhui-yenye yezona dolophu zidumileyo zesayensi kunye nezemfundo e-China.
4. IECO soloko ilandela imigangatho "yokunciphisa iindleko zokupakisha, kodwa gcina umgangatho".
5. IECO baye bafumana ISO9001 kunye CE kwezatifikethi
6. IECO inganikezela ngenkonzo yendlu ngendlu naphina emhlabeni. Isikhokelo esikude sinokubonelelwa ngeseli kunye nenethiwekhi ngaphambi nasemva kwentengiso.
1. 20years amava umatshini auto ukupakisha ngokupheleleyo
2. Sivume nge- CE
3. 24hours iinkonzo kunye 12months isiqinisekiso
4. Unokubonelela ngegcisa phesheya ukuba ligunyazise
1..Q: Ngaba uyifektri okanye inkampani yorhwebo?
A: Singumzi-mveliso okwiphondo laseAnhui, kwisixeko saseHefei. Kwaye sinabathengi eAfrika, eYurophu, eMzantsi Melika, eAsia naseMntla Melika. Nceda wabelane ngeemfuno zakho zokupakisha, emva koko siya kuzama ukuncoma ukuba ube nemodeli efanelekileyo kunye nevidiyo yokusebenza kwabathengi bethu.
2..Q: Yintoni isiqinisekiso sakho ngomatshini?
A: 1 unyaka ukusukela umatshini efika mveliso yoMthengi.
3.Q: Kutheni ukhetha thina?
A: Iqela le-R & D lobungcali, elinokuthenjwa kwaye elingqongqo inkqubo yolawulo lomgangatho. Sivavanya zonke iimveliso zethu ngaphambi kokuba zithunyelwe ukuqinisekisa ukuba yonke into ikwimeko efanelekileyo.
4.Q: Ngaba ungazilungiselela amagcisa akho ukuba asifakele umatshini?
A: Ewe, siya kunika iinjineli zethu ukuba ziye phesheya ngokufaka oomatshini kubaxumi bethu. Kwaye ukuba uneqela leenjineli, sikwabonelela ngemiyalelo yokufundisa ngesiNgesi, iindawo zokungcebeleka kunye nezixhobo zokufaka.
Previous: Zenzekelayo nkqo Baling Machine, Bags ezincinane Into Big PE Bag Ukupakisha Bailer Machine
Next: Zenzekelayo Umatshini oSebenzayo weCartoning wee-Ampoules kunye neTeabag
Wokuhlamba izitya Powder Ukupakisha Machine
Idilesi: NO.02658 3 # workshop floor 1st Changning kwisithili Ave.High-zobugcisa, Hefei, China
Phone: Ffoniwch ni nawr: +86 18656940167
Peiriant Pacio Awtomatig , Pacio Bwyd Machine , Pacio Machine , Peiriant Pecynnu , Tsieina Pacio Machine , Powder Ukupakisha Machine,